Allsomali24.com | Archive | WAREYSIYO
Home » Archives by category » WAREYSIYO
DAAWO VIDEO: Qiso Naxdin badan Noloshii hore & Maanta Macallin Xiito
Waxaan halkan idin kugu soo gudbineynaa Barnaamij muuqaal ah oo ku saabsan Qiso Naxdin badan oo uu uga hadlayo Noloshii hore iyo maanta Macallin Xiito. ee daawasho wacan. HOOS KA DAAWO VIDEO-ga oo Dhammeytiran:
Oct 10, 2016No CommentRead More
DHAGEYSO: NUSOJ oo ka hortimid go’aanka Saxaafadda looga mamnuucay Garoonka Aadan Cadde
Ururka Suxufiyiinta Qaranka (NUSOJ), ayaa walaac xoogan ka muujiyay amarka ka soo baxay Maamulka Garoonka Aadan Cadde, ee ku aadan in Saxaafadda aysan muddo lixdan cisho geli karin Garoonka. Maareeyaha Guud ee Maamulka Amniga Garoonka Aadan Cadde, General Cabdi Ashkir Jaamac, ayaa Arbacadii soo saaray warqad digniin ah oo ku wajahan Warbaahinta gaarka loo leeyahay […]
Sep 22, 2016No CommentRead More
DHAGEYSO: Barnaamij gaar ah oo Ku Saabsan Ciidda
Warbaahinta Allsomali24.com waxay halkan idin kugu soo gudbineysaa, barnaamij xiisa leh oo ku saabsan ciidda. Barnaamijkan oo ka baxay laanta Af Soomaaliga ee VOA-da, ayaa waxaa marti ku ah fahaaniin ay ka mid yihiin, Nasteexo Indho oo ku sugan Norway, Axmed Zaki oo ku sugan Austria, Ubax Fahmo oo ku sugan Hargeisa. Haddaba, barnaamijka waxaa daadihinaya, […]
Sep 13, 2016No CommentRead More
Dhageyso: Cali Khaliif oo Jawaab kulul siiyey Xasan Sheekh iyo Gaas!
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyr, ayaa si adag uga hadlay go’aanka ay dowlada Somalia Khaatumo ku hoosgeysay maamulka Puntland ee uu Hogaamiyaha ka yahay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. Galeyr oo u waramaaya Idaacada VOA laanteeda afka Somaliga looga hadlo, ayaa qaadacay go’aanka kasoo baxay shirka madasha Qaran ee kusoo idlaaday magaalada Muqdisho ee caasimada […]
Aug 11, 2016No CommentRead More
Dhageyso: Maxaad kala socotaa in Kaniisad cusub laga furay Hargeysa?
Idaacadda kaniisadda ugu sarreysa madhabta kirishtanka ee Roman Catholic ayaa baahisay in kaniisad yar dhowaan laga furay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Kaniisaddan, ayaa sida ay idaacadda sheegtay, waxaa lagu sharfay oo lagu xasuusanayaa baadari lagu magacaabo St. Anthony oo ahaa reer Podua. Baadari lagu magacaabo Giorgio Bertin oo afartan sano muddo laga joogo ahaa […]
Dhageyso: Muxuu ka yiri ‘Axmed Madoobe’ qodobadii ka soo baxay Shirkii Madasha?
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa dib ugu laabtay Shalay Kismaayo isagoo si diiran loogu soo dhaweeyey Halkaasi. Soo dhaweyn kadib markii loo sameeyey Axmed Madoobe ayuu shir jaraa’id qabtay kana hadlay sida uu u arko shirkii Madasha Wadatashiga Qaran ee Lagu soo gaba gabeeyey Maalin Ka hor Ee Muqdisho. Axmed Madoobe ayaa […]
Dhageyso:C/weli Gaas oo Cali Khalif ku sheegay inuu xanuunsan yahay!
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali (Gaas) ayaa sheegay in Cali Khaliif uu qabo cudur dadka jecleysiisa ciddii dhibaato u geysata oo loo yaqaan “Stockholm syndrome”. Isagoo ka hadlayay kadib markii uu maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garowe ayaa la weydiiyay su’aal ku saabsan wadahadalka Maamulka Somaliland iyo Cali khaliif Galeyr, wuxuuna sheegey inaysan Puntland […]
Dhageyso: M/weyne Gaas ”Wax la yiraahdo Khaatumo & Maakhir ma jiraan”!
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali (Gaas) ayaa ku guuleystay inuu isago saxiixo, isla markaana xildhibaanada Beesha Khaatumo ka soo galaya labada aqal ee Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya lagu soo doorto magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Arrintan oo muran ka taagnaa shirkii Madasha ayaa ugu danbeyn ay Puntland ku guuleystay in dhammaan beelaha Daarood ee Waqooyiga […]
Aug 10, 2016No CommentRead More
Dhageyso: Xaalada Cayaatoyda Soomaalida ee Olombikada
Iyadoo Soomaaliya ay ku jirtay colaad sokeeye iyo burbur ayaa hadana dhinaca kale waxaa ay mar walba u direysay tartamada gobolka iyo cayaaraha Olombikada caalamiga ah koox hadba matasha Somalia. Shaqada ugu weyn ee ay qabtaan ayaa waxa ay aheyd inay tartamadaa ka muujiyaan calanka iyo jiriraanka magaca Somalia. Laakiin, caqabadaha horyaalay cayaartooyda Soomaaliya mataleysa, […]
Aug 9, 2016No CommentRead More
Dhageyso: M/weyne Gaas ”Itoobiya iyo Kenya waa Cadwoga Soomaliya”
Madaxweynaha Maamul Gobolleedka Puntland, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay sida Dalalka Deriska ay caqabad uga yihiin Nabad ka islaaxda Soomaaliya. Dr. Gaas waxa uu sheegay in Waddamada Saaxibada la ah Soomaaliya ee Deriska ay ka faa’iideysanayaan dhibka iyo dawlad la’aanta jirta. Madaxweynaha Puntland waxa uu hoosta ka xariiqay in Dawladnimo Adag oo […]
Aug 4, 2016No CommentRead More
Page 1 of 227123Next ›Last »	Advertisements
KU BIIR ASXAABTA FACEBOOK